Xuddunta Sare ee Cusub 16DCT Athlonix ™ Mini Motor
Portescap waxay soo bandhigeysaa mootada cusub ee 16DCT si ay uhesho heerkeedu sarreeyo DCT ee matoorrada Athlonix. Mashiinka 16DCT wuxuu geyn karaa tiknoolajiyad isdaba-joog ah illaa 5.24 mNm oo dhererkeedu yahay 26mm oo keliya.
16DCT waxay adeegsaneysaa magnets Neodymium awood badan iyo naqshad tamarta hufan oo la hubo oo Portescap ah. Gariiradda is-taageerta ee la habeeyay waxay hubineysaa waxqabadka sare in lagu soo gudbiyo xirmo isafgarad ah, yaraynta qiimaha guud ee lahaanshaha. Marka loo barbardhigo matoorrada la midka ah ee suuqa, 16DCT waxay leedahay qawaaniinta ugu hooseeya ee matoorka (R / K2) taas oo macnaheedu yahay inay leedahay hoos u dhac xawaare hoose ee xamuulka kordhaya. Tani waxay siisaa matoorka ugu awoodda badan ee aad heli karto oo aad u baahan tahay baahiyo kala duwan oo codsi ah. Tilmaamahan, oo lagu daro waxtarka ilaa 85%, wuxuu ka dhigayaa matoorka 16DCT inuu yahay xalka dhaqdhaqaaqa ugu fiican ee qalabka ku shaqeeya batteriga.
16DCT waxaa lagu heli karaa bir qaali ah iyo garaafyada nidaamyada isu socodka waxayna ku haboon tahay codsiyada sida mashiinada caafimaadka iyo bambooyin warshadeed, nidaamyada bixinta dawooyinka, nidaamyada robotka (faraha bionic), aaladaha awooda warshadaha yar yar, mashiinada tatooyada, qoryaha mesotherapy, qalabka ilkaha, dabeylaha saacadaha, iyo xargaha warshadaha. Codsiyada kale ee ay ka mid yihiin amniga iyo marin u helka iyo aalado bini’aadamnimo oo bini’aadam ah ayaa ku fiicnaan kara iyaga oo isticmaalaya 16DCT Athlonix motor
Waqtiga dhejinta: Feb-27-2018